EYH Series abụọ akụkụ igwekota - China Changzhou Daming Pharmaceutical Equipment
EYH Series abụọ akụkụ igwekota tumadi mejupụtara atọ akụkụ: rotor drum, swinging ogbe eku. The rotor drum dabeere na swinging ogbe, na-akwado site ụkwụ anọ na ya axial fixation na mere abụọ chock wiil. Abụọ nke anọ wiil na-chụpụrụ site n'usoro ike usoro ime ka cylinder bugharia. The swinging ogbe a na-chụpụrụ site na a set nke crankshaft oscillating mmanya nke na-ndokwasa na etiti ma swinging ogbe a na-akwado na etiti.
The n'usoro cylinder nke EYH abụọ akụkụ igwekota nwere ike na-akpali na abụọ-direction n'otu oge. Otu bụ adiana nke drum na ndị ọzọ na-swinging nke drum tinyere swinging ogbe. Materials-agwakọta ga-agba gburugburu mgbe drum na-n'usoro, na a ga-agwakọta ekpe ma ziri ezi mgbe cylinder na-swinging. Dị ka a n'ihi nke abụọ ndị a mezuo iwu, ihe nwere ike weere n'ụzọ zuru ezu na a obere oge. EYH abụọ akụkụ igwekota adabara agwakọta ntụ ntụ na granule udi ihe.
Previous: DSH Series Ugboro abụọ ịghasa cone igwekota
Next: HJ Series abụọ cone igwekota
kpọrọ nkụ ntụ ntụ igwekota Machine
Rapid igwekota Granulator
Rapid igwekota Granulator Machine
Atọ akụkụ Motions igwekota